के हुन्छ बेलाबेलामा वीर्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ ! – Namaste Host
March 6, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on के हुन्छ बेलाबेलामा वीर्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ !
काठमाडौं। के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने, धारा छुट्दा छरिएर जाने आदी स’मस्या छ रु अथवा, अण्डकोष सु’निने, गनाउने, नाइटोमुनि दु’ख्ने’, वीर्य खस्दा पो’ल्नेजस्ता स’मस्याले सताउँछ र यी मध्ये कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने सोच्नुस तपाइको प्रोस्टेट ग्रन्थी ९पुरुष प्रजनन ग्रन्थी०मा स’ङ्क्रमण भएको हुन सक्छ ।पूर्व राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलार्इ पनि यस्तै लक्षण देखिएपछि भारतको अस्पतालमा परीक्षण गर्दा प्रोस्टेट क्या’न्सर भएको पत्ता लागेको थियो । पछि अमेरिकामा उनको उपचार गरियो । उनले भने, ‘प्रोष्टेट पनि भनिने पुरुषमा प्रजनन ग्रन्थीमा समस्या आयो भने माथि भनिएजस्तो लक्षण देखिन्छ । रोग लाग्न यी सबै लक्षण देखिनै पर्छ भन्ने होइन । तीमध्ये एकभन्दा बढी लक्षण देखिए पनि प्रोस्टेटको स’मस्या हो कि भनेर सतर्क हुनुपर्छ ।
हो त्यस्तै हो वीर्य र प्रोस्टेट ग्रन्थीको सम्बन्ध पनि । जति वी’र्य निस्क्यो उति नै प्रोस्टेटलाई फाइदा हुन्छ,’ डा। रौनियारले भने ।चिकित्सकका अनुसार महिना या वर्षौंसम्म यौ’न सम्पर्क नहुँदा प्रोस्टेटमा स’मस्या देखिन्छ । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि नियमित यौ’न सम्पर्क गर्ने, २४ घन्टामा पाँच लिटर पानी पिउने, नियमित रुपमा पिसाबको जाँच गरी स’ङ्क्रमणबाट बच्ने र म्यो’ग्नेसियमयुक्त खानेकुरा जस्तै काजु, पेस्ता, बदाम, ओखरलगायत खाने गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ ।